Dispensary Internet Marketing na Search Engine Optimizaton
Etu ị ga - esi ekwe gị nkwa ịre ahịa azụmaahịa na - eweta ndị ahịa ọhụụ.
E nwere ọtụtụ ụzọ ndị obere azụmaahịa na-akpọsa iji kpọbata ndị ahịa ọhụụ gụnyere, redio, TV, bọọdụ mkpọsa, akwụkwọ akụkọ na ahịa ịntanetị na-ekesa. Nsogbu ndị na-echekwa ụlọ ahịa na-eche ihu bụ otu esi agwa nke ọma ụzọ ụzọ mgbasa ozi si arụ ọrụ. Ọ gwụla ma ị jụrụ ajụjụ maka ndị ahịa ọhụụ ọ bụla batara n’ọnụ ụzọ kedu ka ị ga - esi mata usoro nke na - eweta gị, ndị ahịa ọhụụ? Ozi a dị oke mkpa n'ịzụlite azụmaahịa gị n'ihi na ọ na-enye ndị njikwa ohere itinye ego karịa ihe na-arụ ọrụ ma chekwaa ego na atụmatụ azụmaahịa na-anaghị arụ ọrụ. N'ime nhọrọ ahia ahia niile mara, Google bụ naanị onye na-enye data a na-apụghị ịgbagha agbagha na ọnụ ọgụgụ ndị ahịa na-achọta azụmahịa gị site na nyocha ịntanetị. Google na-enye ọnụọgụ kwa ọnwa nke ọnụọgụ ndị ahịa na-pịa ntụziaka maka ụlọ ahịa gị kwa ọnwa. Nke a bụ ihe magburu onwe ya na-egosi ole ndị ahịa ọhụrụ Google na-enye azụmaahịa gị ma nye gị ọnụọgụ siri ike iji gbakọọ azụmaahịa ahịa gị na nloghachi na uru.
Ka anyị gosi gị otu ihe atụ nke ndị ahịa anyị bụ ụlọ ọgwụ wii wii na-atọ ụtọ nke dị na Tacoma Washington. Na ihe osise dị n'okpuru ebe a, anyị na-enye nseta ihuenyo mgbe onye ahịa na-achọ ụlọ ọgwụ na Tacoma Washington wee họrọ Green Collar Cannabis. N'elu aka nri aka nri, enwere bọtịnụ na-ekwu ntụzi aka. Ozugbo onye ahịa pịa bọtịnụ ahụ, ọ na-akpọrọ ha na eserese ngosi na-enye ha ntụzi aka site na ọnọdụ ha ugbu a ozugbo na azụmahịa gị. Ihe ọtụtụ ndị nwe ụlọ ọrụ na-amaghị bụ na Google na-agbasochi egwu EGO oge onye ahịa pịa bọtịnụ ahụ. Ọ bụghị naanị na ha na-esochi ọnụọgụ ndị mmadụ pịa bọtịnụ ahụ mana ha na-esochi EBE ha dị. Nke a bụ data dị oke ọnụ ahịa nke enweghị ike ị nweta site na nhọrọ ịzụ ahịa ọ bụla ọzọ.
Ihe ọzọ dị mkpa ịghọta bụ na naanị ndị ahịa ỌH NEWR will ga-pịa bọtịnụ ntụziaka ebe ọ bụ na ndị ahịa ugbu a ga-amaworị otu esi achọta azụmahịa gị n'ọtụtụ ọnọdụ. Onu ogugu uru a na ere maka otutu ulo ahia di ihe ruru dolla 8 kwa onye ahia. M na-echetara gị na nke a bụ naanị ma ọ bụrụ na onye ahịa ahụ zụrụ otu ihe ma ghara ịlaghachi ma anyị amatala site na usoro dị ugbu a na ụlọ ọgwụ wii wii na-enwe ntụrụndụ na-enwe njigide ihe dị ka pasent 60 na uru ahụ dị elu karịa. Lee edemede anyi: Ego ole bụ ahịa ahịa ahịa.
Site na ịgbakwunye ọnụ ọgụgụ ndị ahịa gosipụtara na ndakpọ a, anyị na-abịa 1129 ndị ahịa ọhụrụ webatara site na Google Search maka azụmahịa a. Ma buru n'uche na nke a bụ naanị maka Google, ọ naghị agụnye Bing na engines ọchụchọ ndị ọzọ. Mgbe anyị na-amụba 1129 x * 8.00 anyị na-enweta $ 9,032 dollar na uru kwa ọnwa. Ugbu a ọnụ ọgụgụ ahụ dị elu karịa n'ihi na ọ bụghị mmadụ niile na-enyocha azụmahịa gị ga-pịa bọtịnụ ntụzịaka. Fọdụ ga-abanye adreesị ahụ ozugbo na usoro igodo ha ma ọ bụ nweta ntụziaka site na weebụsaịtị ndị ọzọ. Isi ihe nke isiokwu a bụ iji gosipụta na itinye ego na njikarịcha Ngini Nchọpụta bụ otu n’ime nhọrọ ezi uche dị na ya maka ịkwado usoro ndị ahịa ọhụụ. Ọ bụghị naanị na Google na-enye gị nọmba mana ha na-enye gị ebe ndị ahịa gị si abịa. Ọ bụrụ na ị hụ mpaghara nke obodo gị ịchọrọ ịchụ, ị ​​nwere ike ịnwe ụlọ ọrụ SEO gị tinye mkpụrụokwu ndị ọzọ iji webata ego karịa. Pasent 93 nke ọchụchọ niile dị na Google yana ọ bụrụ na azụmaahịa gị egosighi na ibe mbụ ndị ahịa ahụ niile na-aga ndị asọmpi gị.
At Isenselogic.com mmemme SEO anyị na-amalite maka obere $ 500 dollar kwa ọnwa ma anyị na-ekwe nkwa ọrụ anyị. Ọ bụrụ na anyị anaghị abawanye ọnụ ọgụgụ nke ndị ahịa na-abịa site n'ọnụ ụzọ gị nke ị gosipụtara site n'aka Google Console anyị ga-arụ ọrụ n'efu ruo mgbe anyị nwere opekata mpe ọnụọgụ ndị ahịa gị na-abata. Kpọtụrụ anyị taa maka a free SEO oditi na anyị ga-enye gị a free osompi akụkọ na isiokwu analysis azụmahịa gị. Ọnụ ego $ 800.
Nsonaazụ Ahịa Google anyị
Ego ole ka akwụkwọ na ahịhịa na-akwụ ụgwọ?
Eziokwu Dispensary SEO